Nina Agdal namaly ny mpamaly azy noho ny famoahana sary diso
Ny dikan-teny danoà 26 taona Nina Agdal, izay nanjary nalaza noho ny asany tamin'ny fomban'ny nokleary, fa koa ho an'ny tantara miaraka amin'i Hollywood mpilalao horonantsarimihetsika Leonardo DiCaprio, dia mazoto mitazona pejy ao Instagram. Ao aminy dia mamoaka ny sariny ny zazavavy, izay manaitra ny firaisana ara-nofo sy ny famotsoran-keloka. Mpankafy maro an'isa no nangalatra an'i Agdal, fa misy ihany koa ireo izay mino fa ny modely dia mitandrina tsara.
Fantatr'i Nina ny fomba hamaliana amin'ny fomba tsy miangatra amin'ny mpangalatra
Ny marainan'ny omaly ho an'ireo mpankafy ny Agdal 26 taona dia nanomboka tamin'ny zava-misy fa nahita sary vaovao izy ireo. Navoaka tao amin'ny pejin'ny Instagram an'i Nina ilay sary ary tena maina. Tao aminy dia nibitsibitsika tamin'ny kapa misy lelany avo lenta ilay zazavavy mipetraka eo am-pandriana.
Sary avy amin'i Nina Agdal
Nahitana fanoherana toy izany, mpanararaotra maro no nanoratra tao amin'ny tambajotra sosialy momba ity karazana drafitra ity: "Nahoana ny zazavavy iray no mamoaka ny vatana mangatsiaka? Toa ahy fa lasa adala izao tontolo izao! "," Tsy miresaka aho hoe modely tsara tarehy i Nina, fa maninona no mampiseho ny tapany mangatsiaka ao amin'ny vatana? Mieritreritra ve izy fa hanana lehilahy bebe kokoa avy amin'izany? Tsy azo antoka aloha izany, "" Ny sary, mazava ho azy, tsara tarehy, fa tena malaina. Tsy tiako ny mijery sary toy ireny, satria lasa izany. Afangaro! ", Etc.
Taorian'ny famakiana fanadihadina maro, Agdal dia nanapa-kevitra ny hamaly ireo mpanakiana, saingy nanao izany tamin'ny fomba tsy mahazatra. Namoaka sary tao amin'ny tambajotra sosialy izy izay natao tamin'ny famoahana ny Sports Illustrated tamin'ny taon-dasa. I Nina kosa nanao azy io, ary nanao kofehy vita amin'ny metaly volomparasy sy kofehy marevaka, izay nidina ambany. Teo ambanin'ny sary, Nina nanoratra ireto teny ireto:
"Manokana io sary io ho an'ireo izay mieritreritra fa ratsy ny sarimihetsika" mitanjaka ". Ho anao manokana, manokana ny akanjo sasany. Jereo ny fahasalamana! ".
DiCaprio nalain'i Nina Agdal malala dia niampanga ny gazety Sports Illustrated tao amin'ny bodysheying
Nina Agdal nihaona tamin'ny zanak'i Christie Brinkley
Leonardo DiCaprio sy Nina Agdal nisaraka fomba taorian'ny herintaona
Nina mitsikera tsy tapaka ny sariny
Ny tranga miaraka amin'ny sary "sarotra" dia tsy lavitra ny voalohany, rehefa manakiana ny endrik'i Agdal ny mpitsabo bodysheymers. Vao haingana, tao amin'ny pejiny tao amin'ny Instagram, ilay zazavavy dia namoaka sary tao anaty akanjo iray tsy tiany, ary niantso azy hoe "matavy". Ho setrin'izany dia voatery nanoratra lahatsoratra toy izao i Nina:
"Tsy miraharaha izay eritreretinao aho. Mijery tsara aho ary tsy hanova na inona na inona amin'ny tarehiko. Ireo izay manaraka ny fahaizako sy ny fiainako dia mahafantatra fa tsy manana ny ascetic physique izay ny ankamaroan'ny modely ankehitriny, fa ny fanatanjahantena iray. Ity no "ifantohako".
Sophie Turner dia manana bilaogy miafina miaraka amin'ny tsikera ... sosisina sy sakafo hafa
Taorian'ny fifamotoana tamin'ny vadiny, Patrick Dempsey dia nividy trano lehibe tao Malibu
Miranda Kerr dia nitsikera ny vahoakan'i India noho ny fanambaran'ireo Evan Shpigel fofombadiny
Eddie Redmayne miaraka amin'ny vadiny Hannah - tovovavy iray mamelively mankany Paris
Lora Prepon ary i Ben Foster dia tsy nanafina ny fofombadiny
Ilay mpilalao sarimihetsika Nicolas Cage dia hamerina ny artifact miavaka amin'i Mongolia
Vaovao avy amin'ireo maherifo an'ny "The Game of Thrones" nataon'i Sophie Turner sy Macy Williams
Selena Gomez - ny endrika vaovao momba an'i Louis Vuitton
Amin'ny firy no manamarina ny fitondrana vohoka ny fitsapana?
Goat Goat on the stem
Niresaka momba an'i Prince Harry i Chelsea Davy ny alin'ny mariaziny niaraka tamin'i Megan Markle
Fitsaboana amin'ny ra
Pumpkin avy amin'ny fahatsapana - tànana vita tanana
Mipetaka ny akondro
Fomba hanamboarana fehiloha eo amin'ny loha
Karazana ahi-maitso inona no azon'ireo hamsters?
Sakafo levona ho an'ny pies - tsotsotra tsotra sy mahasalama ho an'ny fofona namboarina
Leg in the oven - ny fomba tsara indrindra hahazoana hafanana tsara ho an'ny fety rehetra